Ihowuliseyili ZGX Series Grille Decontamination Machine Manufacturer kunye noMboneleli |JINLONG
I-ZGX series yegridi yokususwa kwenkunkuma lizinyo elikhethekileyo leharika elenziwe ngeplastiki yobunjineli ye-ABS, inayiloni 66, inayiloni 1010 okanye intsimbi engatyiwayo.Idityaniswe kwishafu yezinyo leharika ngendlela ethile ukuze yenze ikhonkco lezinyo lerake elivaliweyo.Inxalenye yayo esezantsi ifakwe kumjelo wokungena.Iqhutywa yinkqubo yothumelo, lonke ikhonkco lamazinyo eharika (amanzi ajongene nobuso obusebenzayo) lishukuma ukusuka ezantsi ukuya phezulu kwaye lithwala inkunkuma eqinileyo ukuyohlula kulwelo, Ulwelo luqukuqela kwisithuba segridi yamazinyo eharika, kwaye yonke inkqubo yokusebenza ngokuqhubekayo.
Ubume obudibeneyo kunye nokudibanisa, iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo.Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ingxolo ephantsi kunye nokusebenza kakuhle kokwahlula.
Ukucocwa ngokuqhubekayo ngaphandle kokuvaleka kunye nokukhutshwa kwe-slag ecocekileyo.
Ukumelana ne-corrosion efanelekileyo (zonke iindawo ezihambayo ziyinsimbi engenasici kunye neyiloni).
Ukusebenza okukhuselekileyo.Inkqubo yothumelo ixhotyiswe ngokukhuselwa kabini kokhuseleko lomatshini wokhuseleko kunye nomda wokulayisha ngaphezulu.Isixhobo se-overload limiter sinokubonisa umthwalo wothumelo.Xa ikhonkco langaphantsi kwamanzi okanye amazinyo eharika ebambekile, injini iya kuwacima amandla ngokuzenzekelayo.Isixhobo sinojongano olude lokujonga ujongano olukude lokusilela komatshini.
Ngaphambili: Uhlobo lwe-ZWN loShicilelo lokuHluzo oluNxulumayo (uHluzo oluncinci)
Okulandelayo: ZSC Series Rotary Bell Uhlobo Sand Sand Ukususa Machine
Uchungechunge lwe-ZHG lwe-crane scraper, izixhobo zokukhuhla udaka
Uthotho lwe-ZQF loMatshini wokuFafaza komoya ongekho nzulu
Oomatshini bokwenza iphepha langasese
Ukwehlisa kunye nokuNciphisa iProsesa yaManzi
2850 SLANTING ISITSHAPZI UKWENZA IPHEPHA ELIPHEPHILEYO LE-MA...